Isku muuji baarka hudheelka, ka faa'iideyso gabadha, oo carruurtaada keen!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Isku muuji baarka hudheelka, ka faa'iideyso gabadha, oo carruurtaada keen!
Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Shiinaha • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay hudheelkan. Maareynta ayaa dooneysa inay ku siiso khibrad taas ka duwan. Waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad nafsaddaada u bandhigto baarka. Sinada waa la aqbalaa. Hoteelka ayaa sidoo kale leh kalkaaliyayaal aqoon sare leh oo la heli karo galbihii si ay caruurtaada u dejiyaan. Ka dib intaas oo dhan Hotelkan ku yaal Beijing waa mid saaxiibtinimo qoys leh.
Markaad ka baxdo hudheelkeenna dhammaadka fasaxaaga, rajo kama lihid! Sinada waa la dhiiri galiyaa.
COVID waxay bedeshay safarka iyo dalxiiska, oo ay kujiraan hudheelada iyo meelaha loo dalxiis tago, oo ay kujiraan dhamaan warshadaha martigelinta.
Ka waran wax yar oo soo-gaadhis ah baarka hudheelka. Keen caruurtaada maxaa yeelay sinadu waa caadi. Tani waxay suurtogal ka noqon kartaa oo keliya Shiinaha, mise tan ayaa luntay turjumidda?
Nooca sanadka ah ee aan ku wada jirnay adduunka oo dhan, mararka qaarkood warbaahinta bulshada waxay keeneysaa baxsan aan dhammaanteen u baahanahay dhammaadka maalinta.
COVID waxay bedeshay warshadaha martigelinta. Ayaa dhahaya baraha bulshada runti wax uma fiicna marka laga reebo kuwa raba inay naftooda u suuq galiyaan qaab, qaab, ama qaab?
Waa tan goes
Saaxiib ayaa dhowaan tagay Beijing waxaana la siiyay buug-yarahan hoteelka. Waa qaali. Way xafidaysaa oo akhrinaysaa mar kasta oo ay qosol fiican u baahan tahay. Sida iska cad, waxaa si toos ah loogu tarjumay, erey ama eray, laga soo bilaabo Mandarin ilaa Ingiriisi.
Wakiilkayagu wuxuu kaa dhigi doonaa inaad ku sugto garoonka diyaaradaha. Baska tagaya hudheelka ayaa mara xeebta harada. Dhawaan waxaad dareemi doontaa raaxo biyo dhaafiyo. Waad ogaan doontaa inaad ku dhowdahay hudheelka, maxaa yeelay waxaad ku wareegi doontaa leexinta. Maamulaha ayaa kugu sugi doona hoolka laga soo galo. Wuxuu had iyo jeer isku dayaa inuu xiriir la yeesho dhammaan martida cusub.
Kani waa hudheel qoys, sidaa darteed carruurta aad baa loo soo dhaweynayaa. Dabcan marwalba waan ku qanacsanahay inaan aqbalno sino. Kalkaaliyayaal aqoon sare leh ayaa la heli karaa fiidki si loo rido caruurtaada. Martida waxaa lagu casuumay inay ku dhex xirmaan baarka isla markaana naftooda u muujiyaan kuwa kale. Laakiin fadlan ogow in haweenku aan loo ogoleyn inay ku dhalaan baarka. Waxaan abaabulnaa ciyaaro bulsheed, sidaas darteed martisoor waligiis keligiis uma hadhin inuu la ciyaaro nafsadooda.
Liiskayaga ayaa si taxaddar leh loogu doortay inay noqdaan wax caadi ah oo aan macne lahayn. Cashada marka la joogo, rubuckeenu wuxuu ku wareegi doonaa miis ilaa miis oo wuu kula shaashanayaa.
Qol kasta wuxuu leeyahay tas-hiilaad aad u wanaagsan qaybahaaga gaarka ah. Xilliga jiilaalka, qol kasta wuxuu kuleylka ku jiraa. Qol kasta wuxuu leeyahay balakoon lagu soo bandhigo aragtiyada fisqiga! Kuma dhibsan doontid buuqa taraafikada maadaama wadada u dhaxeysa hudheelka iyo harada loo isticmaalo kaliya kuwa istcimaala.
Sariirtaada waxaa loo sameeyay si waafaqsan dhaqanka deegaanka. Haddii aad hayso wax fikrado kale ah, fadlan wac shaqaalaha guriga. Fadlan ka faa'iideyso iyada. Aad ayey ugu farxi doontaa inay ku xoqdo shaatiyadaada, blouses iyo nigiskaaga. Haddii la weyddiiyo, iyadu sidoo kale tuujinaysa surwaalkaaga.
Markaad naga tagto dhammaadka fasaxaaga, wax rajo ah ma yeelan doontid. Waxaad halgan ugu jirtaa inaad iska ilowdo.
Marka, ma qorsheyneysaa kanaga safarka Beijing?